အာဖရိကမော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
Au Cameroun, effroi et colère après le massacre de huit élèves dans le Sud-Ouest anglophone – Jeune…
Tele RELAY တစ်ခု အောက်တိုဘာ 25, 2020 0
အနောက်တောင်ပိုင်း၏အင်္ဂလိပ်စကားပြောဒေသရှိ Kumba ရှိပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ခုတွင်ကျောင်းသားရှစ်ယောက်အားသတ်ဖြတ်မှုကြေငြာပြီးနောက်အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင်ပြစ်ဒဏ်များတိုးများလာခဲ့သည်။ ...
မာဒါဂက်စကာ - Makay အစုလိုက်အပြုံလိုက်၊ ကာကွယ်ရန်anဒင်ဥယျာဉ် - Jeune Afrique
Le musée des Confluences de Lyon consacre une exposition immersive au massif du Makay. Une région très peu explorée du Sud-Ouest de Madagascar, célèbre pour son incroyable biodiversité mais menacée par…
AfDB - အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ၏ ဦး ဆောင်မှုဖြင့် Senegalese Amadou Hott - Jeune Afrique
၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်၊ ဒါကာတွင်ဆီနီဂေါစီးပွားရေး ၀ န်ကြီးအမာဒူဟော့တ်© Andrew Caballero-Reynolds / AP / SIPA အကျပ်အတည်းပြီးနောက်တည်ထောင်ခဲ့သည်...
အိုင်ဗရီကို့စ်တွင်သမ္မတရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း - အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။ - လူငယ်အာဖရိက
Tele RELAY တစ်ခု အောက်တိုဘာ 24, 2020 0
Yasmina Ouégninသည်ညာဘက်မှ ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင် Abidjan ရှိဆန္ဒပြပွဲတွင်“ တတိယသက်တမ်းကိုငြင်းပယ်ခြင်း” ဆိုင်းဘုတ်ကိုတက်ထားသည်။ ©© SIA KAMBOU / AFP ...
ICC: အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုက Fatou Bensouda - Jeune Afrique အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်သလဲ
စက်တင်ဘာ ၂ ရက်မှ စ၍ အမေရိကန်၏ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများကြောင့်ပစ်မှတ်ထားခံရသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုခုံရုံး၏အစိုးရရှေ့နေသည်သူမ၏အုပ်ချုပ်မှုမှတ်တမ်းများကို Trump အုပ်ချုပ်ရေးမှတားဆီးထားသည်။ ...
Tunisair သည်စွမ်းဆောင်ရည်၏ ၃၀% သောစွမ်းရည်ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည့် Jeune Afrique တွင်ဖြစ်သည်
ကုမ္ပဏီတွင်ယူရို ၃၀၉ သန်းလိုအပ်လျက်ရှိသည်။ © Frank Kovalchek / Flick / CC လိုင်စင်ဥရောပကော်မရှင်မှထောက်ခံချက်၊ တားမြစ်ချက်...
နိုင်ဂျီးရီးယား၏ဘဝသည်ကိစ္စရပ် - ဘူဟာရီသည် #EndSARS လှုပ်ရှားမှုကိုဆန့်ကျင်ရန်ခိုင်ခိုင်မာမာရွေးချယ်ခြင်း - Jeune Afrique
Tele RELAY တစ်ခု အောက်တိုဘာ 23, 2020 0
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်၊ ဂို့စ်တွင်ရဲအကြမ်းဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြစဉ်မိန်းကလေးတစ် ဦး © Sunday Alamba / AP / SIPA...
Casablanca တွင် Lahraouiyine ၏မေ့လျော့ခံရသောကလေးများ - Jeune Afrique
မော်ရိုကိုရှိကလေးဘဝဆိုင်ရာစာအုပ်တွင်စာနယ်ဇင်းသမား - စာရေးသူဟီချမ်ဟူးဒါဖာသည်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိပြီးလေ့လာခဲသောကလေးငယ်များခံစားနေရသောအကြောင်းအရာကိုရှာဖွေလေ့လာခဲ့သည်။ ရွေးချယ်ထားသောအပိုင်းအစများ…
[Tribune] Covid-19: ဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ်များပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အချက်သုံးချက် - Jeune Afrique
ဒေသတွင်းပေါင်းစည်းမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ ဘဏ္mobilာရေးဆိုင်ရာစည်းရုံးခြင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ to ကိုအထောက်အပံ့ပေးခြင်းတို့သည်အာဖရိကစိန်ခေါ်မှုများကိုတုန့်ပြန်ရန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်များ၏အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်
Ivory Coast: Guillaume Soro သည်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သလား။ - လူငယ်အာဖရိက
Tele RELAY တစ်ခု အောက်တိုဘာ 22, 2020 0
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဆယ်ရက်အလိုတွင်၎င်းအနေဖြင့်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုတရား ၀ င်ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျိန်ဆိုခြင်းတို့ပြုလုပ်သောကြောင့် Guillaume Soro သည်ရှုပ်ထွေးသော Ivorian ညီမျှခြင်းကိုမသိရှိရသေးပါ။
123 ... 88 လာမယ့်
စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်Cédric MOTCHEBONG ကကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာဖို့ကြီးကြီးမားမားထင်သည်
လူငယ်များ၏ projectiles အောက်မှာ Bonoua
Nashville SC အသင်းသည် FC Dallas အသင်းကို ၃-၀ ဖြင့်အနိုင်ယူထားသည်
အဘယ်ကြောင့် Facebook နှင့် Instagram ကိုပုံပြင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆို?
PSG၊ မီးရှုံးနိမ့်ခြင်း - ဗီဒီယို